Home Wararka Abiy Axmad oo ku balan furay MW Cagjar & Demeke u...
Abiy Axmad oo ku balan furay MW Cagjar & Demeke u magacaabay RW ku xigeen
Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa meel cidla ah kaga dhaqaaqay MW Mustaf Cagjar oo rajo ka qabay in isaga loo magacaaabo Ra’iisal Wasaare ku Xigeenka dalka Itoo biya. Abiy Axmada oo ku dhowaaqay gole wasaaradeed oo cusub oo ka kooban 22 xubnood, isaga oo kusoo daray xubno mucaarad ah. Wasiirada ayaa waxaa ku jira Demeke Makonen oo sii haynaya jagadii ahayd Ra’iisul Wasaare ku xigeen iyo wasiirka arrimaha dibedda. Sidoo kale waxaa jagadiisii wasiirka maaliyadda dib loogu magacaabay Axmed Shide.
Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya ayaa jagooyin u magacaabay laba xubnood oo kasoo jeeda mucaaradka, sidoo kale waxa uu wasiirka gaashaanhdigga ka dhigay siyaasiga Abraham Belay oo kasoo jeeda Gobolka Tigray.
Hoos ka aqriso liiska Golaha Wasiirada
Demeke Mekonnen Hassen – Ra’iisul Wasaare ku-xigeen iyo Wasiirka Arrimaha Dibedda
Abhrham Belay (PhD) – Wasiirka Difaaca
Ahmed Shide – Wasiirka Maaliyadda
Muferihat Kamil – Wasiirka Horumarinta Magaalooyinka
Oumer Hussen Oba – Wasiirka Beeraha
Engineer Aisha Mohammed – Wasiirka Waraabka iyo Horumarinta dhulka
Engineer Habtamu Itefa Geleta – Wasiirka Biyaha iyo Tamarta
Professor Birhanu Nega – Wasiirka Waxbarashada
Dagmawit Moges – Wasiirka Gaadiidka iyo Saadka
Gebremeskel Chala – Wasiirka Ganacsiga iyo Is-dhexgalka Gobolka
Melaku Alebel – Wasiirka Warshadaha
Binalf Andualem – Wasiirka Nabadda
Gedewon Timotewos (PhD) – Wasiirka Cadaaladda
Dr. Lia Tadesse – Wasiirka caafimaadka
Belete Mola – Wasiirka Hal-abuurka iyo Taknoolajiyadda
Ambassador Nasise Chali – Wasiirka Dalxiiska
Lake Ayalew – Wasiirka Dakhliga
Chaltu Sani Ibrahim – Wasiirka Kaabayaasha iyo magaalooyinka
Engineer Takelle Uma Benti – Wasiirka Macdanta iyo Shidaalka
Kejela Merdasa Tulu – Wasiirka Dhaqanka iyo Cayaaraha
Ergoge Tesfaye (PhD) – Wasiirka Haweenka iyo Arrimaha Bulshada
Fitsum Asefa (PhD) – Wasiirka Qorsheynta iyo Horumarinta